Dib u dhac ku yimid soo xulista Baarlamaanka Galmudug+(Decument Cadeyn ah) | SMC
Home WARARKA MAANTA Dib u dhac ku yimid soo xulista Baarlamaanka Galmudug+(Decument Cadeyn ah)
Dib u dhac ku yimid soo xulista Baarlamaanka Galmudug+(Decument Cadeyn ah)
Waxaa dib u dhacday soo xulista Golaha Baarlamaanka Dowlad-Goboleedka Galmudug ee bartamaha Soomaaliya oo sida qorshuhu ahaana ay aheed in la shaaciyo Isniinta Maanta xubna Golaha Sharci dajinta Galmudug.
Sida Ku cad warqadii ay soo saareen Gudigga doorashooyinka Galmudug waxa uu qorshuhu ahaa in Maanta oo ah ee 9-ka December 2019, lasoo saaro Liiska Gollaha Shacabka Galmudug ee Xulistiisa dhowaan la daah furay.
Xubnaha Saxiixayaasha ee la xareeyay ayay aheyd sida jadwalka Ku cad in ay soo gudbiyaan liiska oo lasoo bandhigi lahaa maanta sidoo kalena maalinta xigta ayow Baarlamaanku howl gali lahaa waa sida Jadwalka Ku qorone , waxaase layaabka kale leh in wali aan la xareyn kala bar odayaasha Saxiixayaasha Galmudug.
Wararka aan helnay ayaa sheegaya in Howlaha doorashada gabi ahaanba la hakiyay mudo aan la cayimin, Gudoomiye Ku xigeenka Gudigga Doorashada iyo xubno gudigga ka tirsan iyada oo looga yeeray Magaaladda Muqdisho ee caasimada Soomaaliya.
Arintaan ayaa loo sababeeyay is jiijiid ka taagan sida loo soo xulayo Xildhibaanada Galmudug iyada oo ay beelaha qaar isku haystaan cida ku matalaysa soo xulista Xildhibaanada Cusub ee Galmudug iyo Tabshada ay Ahlusunna ka muujiyeen dhismaha Maamulka Galmudug.
Ahlusunna oo la rumaysan yahay in dhankooda culeeska taagan qaybta ugu weyn ka yihiin ayaa dalbanaya fulinta heshiis Xukumada Soomaaliya ay horay ula gashay iyo in beesha Caalamku Marqaati kanoqoto hadii ay heshiis la galayaan Xukumada uu hogaamiyo Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre.
Sida ku cad Jadwalka Guddiga Doorashooyinka Galmudug 10 Dec-12Dec ayay eheed in ay howl galaan Golaha Sharci dajinta Maamulka Khilaafku ragaadiyay ee Galmudug.
Guddiga Doorashada ayaa jadwalkiisa ku sheegay in 13 Dec – 16 dec la doorto Gudoomiyaha Baarlamaanka Maamulka Galmudug iyo labadiisa ku xigeen si loo guda galo doorashada Madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa taas oo loo asteeyay in ay dhacdo 17Dec- 23 december 2019.
Previous articleGuddoonka Golaha Shacabka oo War kasoo saarey dagaalka Mudug
Next articleShir looga hadlayo Arrimaha Dastuurka oo ka furmay Baydhabo